Maitiro ekupinza nharembozha yeAndroid neGoogle Lens ▷ ➡️ Android Pop ▷ ➡️
Google ine akawanda anonakidza masevhisi uye maapplication. Google Play, Gmail, Chrome, YouTube - anenge munhu wese anozviziva uye anoashandisa. Kune mashoma masevhisi anopenya seGoogle Messaging kana Google Calendar. Iwo haapenye kunyanya nekuti iwo akanyanya chishandiso chekushandisa chete. Asi kune zvakare mamwe masevhisi akaderedzwa zvakanyanya aunofanirwa kushandisa nesimba kuti uwane mabhenefiti avo akazara. Google Lens, semuenzaniso, yakaoma kuratidza nenzira ine musoro.
Google Lens ndiyo Google's super application yekuziva chero chinhu nezvose. Super kwete mupfungwa yekuti hapana chinhu chiri nani kupfuura icho, asi mupfungwa yekuti inosanganisa nzira dzakawanda dzinonangana dzakasiyana dzekushandisa. Lens inosanganiswa mune akawanda maGoogle maapplication, akadai seGoogle Photos kana Chrome, asi iwe unogona zvakare kuidhawunirodha zvakasiyana kana uchiida.
Tsvaga chinhu kubva pamufananidzo
Google Lens inogona kukubatsira Chinhu chinozivikanwaIwe haugone kuziva zvinhu zvine zita kana chinangwa chausingazivi. Semuenzaniso, muzhizha rino ndakaona dandemutande mumusha mangu wechirimo chandakanga ndangowana mune mamwe maodzanyemba latitudes. Ndakatora mufananidzo wayo uye Google Lens yakandiudza kuti imhando yerudzii uye kana chiri chinhu chekutya.
Tora mufananidzo kana skrini yechinhu;
Tanga Mapikicha eGoogle uye vhura mufananidzo wechinhu chacho;
Pazasi pechidzitiro, tinya pane lens icon;
Mirira kuti zvizivikanwe uye tsvaga ruzivo nezvazvo.
Muchiitiko changu, nekuda kweGoogle Lens, zvakazoitika kuti dandemutande randaitsvaga rinoitika kumaodzanyemba, asi zvingangoita kuti nekuda kwekupisa kusina kujairika muzhizha rino, mhuka iyi yakatamira kune dzimwe nzvimbo dzekuchamhembe. Sezvineiwo, zvakaratidza kuti hazvina chepfu. Ndatenda kune Target Google.
Shandura mavara akanyorwa nemaoko mumavara echibhuroko
Google Lens yakangwara kwazvo. Unogona kuita zvinopfuura shandura zvinyorwa zvemufananidzo mukudhinda, asi inoitawo basa rakanakisa rekuona manotsi akanyorwa nemaoko. Ndakatanga ndaedza kunyora zita rangu pabepa, asi zvaive nyore kuti maLenzi aone.
Dhawunirodha Google Lens kubva kuGoogle Play;
Vhura iyo application uye sarudza "Text";
Tora mufananidzo wechinyorwa wobva wasarudza;
Mirira kuti zvinyorwa zvizivikanwe uye zvikopa.
Kuita kuti basa rinyanye kuoma, ndakawedzera mutsara wekuti "Google Lens Test" murunyoro rwakapusa rwandaigona kufunga nezvarwo. Asi iyo app yakazviziva zvakare, kunyangwe zvisiri zvachose. Nechimwe chikonzero zvakavhiringika neizwi rekuti "Google" rakanyorwa muchiCyrillic, iro Lens haana kuziva. Shoko rakanyorwa rinogona kutonzwika zvinonzwika kana zvakakodzera.
Mashandurirwo emavara emufananidzo
Google Lens mushanduri mukuruiyo inokwanisa kuturikira zvinyorwa pamidhiya yekunze, senge magwaro kana mabhuku. Ingo simbisa yakasarudzika modhi, nongedzera kamera lenzi pane chinyorwa, mirira kuti izivikanwe, wobva wasimbisa ndima yaunoda uye uwane yekupedzisira mhedzisiro.
Vhura Google Lens pafoni yako;
Sarudza "Shandura" (isina online modhi iripo);
Tora mufananidzo wezvinyorwa kuti ushandurwe;
Sarudza mitauro miviri uye uwane shanduro yapera.
Izvo zviri nyore kuti Google Lens inoshanda mu overlay mode. Kureva kuti mashoko akaturikirwa anopindirana nechinyorwa chikuru. Izvi zvinogona kuonekwa mumifananidzo iri pamusoro, apo zvinyorwa zvinotanga kuoneka muchiRussia uye zvakare muchiChirungu. Asi kana uchida, unogona kungoisarudza wobva wakopa woiisa chero kwaunoda (nenzira yakanaka).
Nzira yekuziva zvipfeko kubva pamufananidzo
Kangani iwe uine ruzivo rwekuona chimwe chinhu mumunhu chawaida iwe pachako, zvinotonhorera sei? Ndakazviita kakawanda. Zvinonyanya kushungurudza kana iwe uine pikicha kana dhirowa, asi usingakwanise kuziva chaizvo izvo munhu akapfeka. Muzviitiko izvi, Google Lens inobatsira zana.
Mhanya Google Lens pafoni yako;
Shandisa "Goods" modhi uye unongedza kamera pamufananidzo;
Tora mufananidzo wayo uye umirire kuti izivikanwe;
Enda kumibairo yekutsvaga yezvigadzirwa zvakafanana.
Sezvineiwo, Google Lens haingoratidzi zvinhu zvakafanana chete, asi chaizvo izvo zvawaona mumunhu, uchiziva kwete zita chete uye mhando, asi zvakare kukupa iwe kuwana kuzvitoro uko izvo zvinhu zviripo kutenga panguva iyoyo. Hongu, rudzi urwu rwekuzivikanwa kwakabudirira hakuitike nguva dzose, asi rinoitika.